AMISOM oo si kulul u beenisay eedeyntii Sheekh Maxamed Shaakir | Dhacdo
Home Wararka Maanta AMISOM oo si kulul u beenisay eedeyntii Sheekh Maxamed Shaakir
AMISOM oo si kulul u beenisay eedeyntii Sheekh Maxamed Shaakir
Taliska Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ayaa iska fogeeyay eedeynta Talaadadii uga timid Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah Hoggaanka Ahlu Sunna ayaa AMISOM ku eedeeyay inay qayb ka tahay burburinta goobaha caafimaadka ee Guriceel, isla-markaana ay baal martay shaqada ay dalka u joogto.
“Ahlu Sunna Waljameeca waxay ka xun tahay in Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM) ay qayb ka noqdaan burburinta isbitaalada iyo goobaha gargaarka, oo ay Dowladda Federaalka Somaliya ka waddo Degmada Guriceel, iyagoo u gudbinaya hub sharci darro ah, oo dhaliyay barakac iyo burbur hantiyadeed, sidoo kalena ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo shaqada AMISOM dalka u joogto.” Ayuu Sheekh Maxamed Shaakir ku sheegay qoraal uu soo saaray.
Taliska AMISOM ayaa eedeymahan ku sheegay kuwo been abuur ah, halisna ku ah xiriirka AMISOM la leedahay bulshada Soomaaliyeed.
“Eedeymahan waa kuwo been abuur oo halis ah, oo si cad loola jeedo in lagu xumeeyo xiriirka AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Taliska AMISOM.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Hawgalka Amisom ee isugu jira midka militariga iyo taageerada ay u fidiso Dowladda Somaliya waxaa haga qaraarada Golaha Nabadgelyada ee Midowga Africa iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.”
AMISOM waxay sheegtay in jooggitaankeeda dalka, madaadii’da haga ay ugu waaweyn yihiin wiiqitaanka maleeshiyada Al Shabaab, in Dowladda Federaalka ka taageerto xaqiijinta amniga iyo dib u soo celinta xasilloonida dalka.
Previous articleXaaladda Guriceel oo mid caadiya ku soo laabanayso
Next articleLafta-gareen oo maanta gaaray Garoonka Balli-doogle (SAWIRRO)